Leeဥပဒေအောက်က ကော်မရှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » Leeဥပဒေအောက်က ကော်မရှင်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 1, 2012 in Opinions & Discussion | 14 comments
သစ်ထူးလွင်သတင်းမှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်းအရ ကြိုတင်မဲထည့်သူတဦးကို ရာအိမ်မူးဆိုသူက ကြံ့ဖွတ်ပါတီကို အတင်းမဲထည့်ခိုင်းတာ အန်အယ်လ်ဒီကို လာတိုင်လို့ မြို့နယ်ကော်မရှင်မှာ တိုင်ထားကြောင်း ဖတ်ရတယ်။ အစိုးရကို ဝေဖန်ရင်တော့ နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု အကြည်ညိုပျက်စေမှု၊ တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှု စတဲ့ပုဒ်ထီးပုဒ်မမျိုးစုံနဲ့ ချဲ့ကားမတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးတယ်။ ဒင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေပါ ပြည်သူတဦးချင်းလွတ်လပ်စွာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးနှောက်ယှက်တာကြတော့ သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စလေးပါတဲ့။ ဒီတော့ တခုမေးဂျင်ဒယ်ဗျာ ရွေးဂေါက်ပွဲကော်မရှင်ကို… မင်းတို့ရဲ့ အခြေခံဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာ လီးလားကွ…။ :mad:
မူရင်းသတင်း – ဥတ္တရသီရိမဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ မောင်းရမ်းကျေး ရွာတွင် ကြိုတင်မဲပေးသူတစ်ဦးကို ရာအိမ်မှူးက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(ပြည်ခိုင်ဖြိုး)အား မဲပေးရန် အတင်းအဓမလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို မေးမြန်းရာ “အရေးယူမှာပါ…ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စဟာ သိပ်တော့ ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ပါဘူး” ဟု မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြောသည်။
ဒီကောင်တွေဒီလောက်ကြောက်နေတာ ဆိုတော. …
ဥကြောင် Lee ဆိုတာနာမည်ကြီးတံဆိပ်ပဲ နေရာတကာမှာတောင်ကြော်ငြာဘူးရယ်……
ကော်ပီရိုက်နဲ့ငြိဦးမယ်နော်…… အဲတံဆိပ်ပိုင်ရှင်က ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိတယ်……
ရွာသားတွေက သူတို့ပစ္စည်းတံဆိပ်ကိုယူသုံးလို့ လူလုံးမလှဖြစ်အောင်
ဥပဒေကသန့်တာများတယ် မသန့်တာက သူ့ကိုသုံးတဲ့ငတုံးတွေ
ကောချင်ရင်တော့ သူတို့ကိုကောပါဗျာ … ခေါင်းဇင်ဂျီးတော့တပ်ပါနဲ့…..
ဒီနေ့ဖေ့ဘွတ်မှာပုံတစ်ပုံတွေ့တယ် ပါးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးလေ …. Myanmar Jokeကတင်တယ်ဆိုလားပဲ
ရှာကြည့်ဦးရှာကြည့်ဦး ဂျူးလီးယက်ဆီဇာကတော့ ဥပဒေကိုလိုသလိုသုံးချင်ရင်ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ရေးပါတဲ့…
ကျုပ်ကတော့ ဒက်နုတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်သာရလို့ကတော့ သူတို့နာမည်တွေချရေးပြစ်မယ် မသန့်အောင်သုံး
တဲ့လူတွေ….. ဒင်းတို့ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်ရပြီ…… ဟင်းစက္ကန့်လေးဆယ်တွင်း မာလကီးယားပေ
တော့ပဲ……. ဂီဂိကိုဂျပန်ကနေ အဲစာအုပ်ပို့ခိုင်းရမယ် Death Noteဇါတ်ကားတော့ကြည့်ဖူးတယ်မလား
ခင်တဲ့….. မောင်ခ ………
ဦးကြောင် .သစ်ထူးလွင် ဒီရက်ပိုင်း မဖတ်နဲ့..ဒေါသတွေ ခီးပြီး . သွေးတက် နေလိမ့်မယ်..
မဲပြား NLD အကွက်မှာ အမှန်ခြစ်မရအောင်လို့ ဖယောင်းသုတ်ထားတယ်ဆိုဘဲ။ကြိုတင်မဲ သွားပေးသူ ခြစ်တာ ခြစ်မရလို့ သုံးလေးခါခြစ်တော့ ပယ် မဲ ဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုဘဲ ။
အွန်းး ကြားရသမျှ ကလိမ်ဥာဏ်က စောက်ဆန်းဂျီးတွေချီးဘဲ
သားက အသက်အခုမှ၁၇နစ်ပဲ ရှိသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ နိင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်အစ်ကိုပြောတဲ့ အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က နိုဗယ်ဆုရတာတော့ သိပါတယ်ငြိမ်းရေးတဲ့ ရတယ်ဆိုတာလဲ သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာမှာငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ခဲ့ တာလဲဆိုတော့ မသိပါဘူးအဲ့ တာကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ် သိရင်ပြောပြပေးကြပါ မြန်မာနိင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တာလားဘယ်နေရာမှငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ခဲ့ တာ လဲ ဆိုကို သိရင်ပြောပြပေးကြပါ
ဘယ်နေရာတွေမှာ သူ့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသလဲ ဟုတ်လား… မသိရင်မှတ်ထား ငတုံးလေးရေ… ၉၉%သော ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ကို ငြိမ်းအေးစေတယ်။ စကားပုံရှိတယ် လမ်းမသိခွေးနောက်လိုက်တဲ့…။ ငါတို့ကတော့ အမှန်ကိုသိလို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုရွေးတယ်။ မင်းသာ စစ်ခွေးနောက်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ခွေးဝဲစားအဖြစ်မခံပါနဲ့…။ လီးထဲမှပဲ… မနက်စောစောစီးစီး ကြက်သရေတုံးဒယ်…။
17 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟလား။ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားရင် မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာ အရေးပါတဲ့ အန်တီစု အကြောင်းတော့သိသင်တာပေါ့ သားရယ်။ သားအဖေကကော မပြောပြဘူးဘူးလား ကွယ်။ အရင်ဆုံး သားအဖေကိုအရင်မေးကြည့်ပါအုန်း။ သားစကားတွေက မသိလို့မေးသလိုနဲ့ ဖဲ့သလိုမျိုးဖြစ်နေပြီ။
ငလမသတွေက တော်တော်များများ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး မပြောပလောက်တဲ့ ပိုနေတဲ့နေရာလေးတောင် စားမန်ခုတ်
စောက်ကျင့်ယုတ်နေတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တော်တော်တော့ ကျက်သရေတုန်းနေပြီ
သတင်တွေ လိုက်စနဲနာတော့ ကလိန်ကကျစ်၊တစ်နေရာတစ်မျိုးနဲ့ညစ်နေတာတွေ တွေ့ ရတော့ ရေလည်တင်းတယ်
အဲတော့.ကိုယ့်ရှေ့ လာယုတ်ရင်တော့ ဟိုအဒေါ်ကြီးလို ထမိန်ကြားက မဲတစ်ပြားမရှိလို့ 
မင်းအုပ်စိုးလို ဘာင်းဘီအောက်က မဲတစ်ချောင်း ပေးလိုက်မယ် အေလိုးဖွတ်ကောင်တွေ
မတရား မဟားဒယား လုဎ်ရပ်တွေရပ်တန်းကရပ်ဖို့သင့်ပြီ ကိုယ်ဆွေကိုယ်မျိုးတွေရဲ့ ရှက်တတ်ကြပါဒေါ့
ဆဲဒေါ့လီးဖြစ်လားကွ…အသံစာစာ စာစာနဲ့ ငါ့ပို့စ်ထဲ မာယာလာမပြနဲ့ ကွသွာမယ်…။ :mad:
ဟေ့ကောင်မာယာ မင်းစောက်ရှက်မရှိဝူးလား စစ်ခွေးမျိုးပီပီ
ချာတိတ်ရယ် မင်းကို မင်းအိမ်ကတစ်နှစ်မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်လလောက်ပဲ အိမ်အပြင်မထွက်ရ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မတွေ့ရ(ဒီလောက်ပါပဲ သိပ်အများကြီးဆိုလျင် တမင်ကြီးဖြစ်မှာစိုးလို့) လို့
ပိတ်ပင်ခဲ့လျင် မင်းဘယ်လိုနေမလဲ၊ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
အမေစု ဘာလုပ်လဲမလုပ်လဲ မင်းမမေးနဲ့ အဲဒါလေးပဲအရင် မင်းကိုမင်းမေးကြည့်စမ်းပါ၊
ဘယ်လိုအဖြေထွက်လဲ၊ အဲဒီအချိန် ဒီနေရာပြန်လာခဲ့ပါ။
tom tom ရေ မင်းမသိလို့ မေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ် သိလို့မေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ် မင်းမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ငါဥာဏ်မှီသလောက်ဖြေပေးလိုက်မယ်( ၁၇ နှစ်ဆိုတော့ ငါ့ထက်အသက် နဲနဲလေးငယ်လို့ မင်းငါ နဲ့ပြောလိုက်တာပါ)
ဒေါ်စု က စစ်ဖြစ်နေတာတွေ တိုက်ခိုက်နေတာတွေကို ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိူဗယ်လ်ဆုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး…
စစ်အစိုးရက ဒေါ်စုကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့တယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခဲ့တာတော့ မင်းသိမှာပါ
အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်စုအနေနဲ့ မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပစ် သလို ဒေါ်စုရဲ့စကားလေး တခွန်းနှစ်ခွန်းနဲ့တင် မြန်မာနှိင်ငံ ၈၈ အရေးအခင်းထက်ပိုဆိုးသွားအောင် ပြည်တွင်းစစ်လိုဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပစ်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုဟာ သည်းခံစိတ်နဲ့ လုံးဝ ရုပ်ထွေးအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် တတိုင်းပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းအောင် ဖြောင်းဖြစကား အားပေးစကားများနဲ့သာ ငြိမ်းချမ်းစေခဲ့တာအားလုံးသိမှာပါ…
အဲဒီ အချိန်မှာ ဒေါ်စုသာ တချက်ကလေးဘဲ ဖွကြည့် မြန်မာနှိင်ငံ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်သွားနိင်တာ ယုံမလားတော့ မသိဘူး…
ဒါကြောင့် ရန်ဖြစ်တာကိုတားမှရတာမဟုတ်ဘူး ..ရန်မဖြစ်အောင်တားခဲ့လို့ ရသောဆုလို့ငါမြင်ပါတယ်
ဒေါ်စုနေရာမှာ တခြားသူသာဆိုရင် ဒေါသအလျှောက် လုပ်မိမယ်ထင်တယ်
ဒါကတော့ ငါ့အတွေးသက်သက်ပါ။…မှားရင်လဲ ငါ အတွေးမှားသာတစ်ခုထဲပါ…